एकको कार्यको लागि उत्तरदायित्व स्वीकार गर्न।
नागरिक उल्ल .्घन उजूरीमा ट्राफिक उल्लंघन, नगरपालिका अध्यादेश उल्ल .्घन, र माछा र वन्यजन्तु उल्ल .्घन समावेश छ। भर्मन्ट ज्युडिशियल ब्यूरोको नागरिक उल्ल .्घनको बारेमा राज्यव्यापी अधिकार क्षेत्र छ। नागरिक उल्ल .्घन कुनै आपराधिक अपराध होईन। यद्यपि अदालतले मोटर उल्लंघनको भेर्मोन्ट विभाग र / वा भर्मन्ट माछा र वन्यजन्तु विभागलाई नागरिक उल्लंघनको फैसला रिपोर्ट गर्दछ।
यो सुनिश्चित गर्दै कि संवेदनशील जानकारी गोप्य राखिन्छ उपयुक्त व्यक्तिको सीमित पहुँचको साथ।
आपराधिक कानूनी प्रणाली:
आपराधिक न्याय प्रणाली को लागी अर्को शब्द जुन धेरै मानिसहरु लाई विश्वास छ कि प्रणाली को अधिक सही परिभाषा प्रदान गर्दछ जुन अन्यायी हो, वा प्रणाली जसले केहि न्याय प्रदान गर्दछ र सबैलाई होइन।
जेल वा जेलमा सीमित हुनु पर्ने अवस्था।
संघीय, राज्य, र स्थानीय एजेन्सीहरूले राज्यको दमनकारी शक्ति प्रयोगको माध्यमबाट सार्वजनिक आदेशको सुरक्षाको लागि शुल्क लगाउँदछन्।
अपराधी / प्रदर्शनकारी;
कोही जसले अपराध गर्दछ, हानी गर्दछ, र / वा गलत कार्यको अन्य कार्यहरू गर्दछ। पुनर्स्थापनात्मक न्याय शब्दावलीमा यसको सट्टा "जिम्मेवार पार्टी" भन्ने पदावली प्रयोग गरिन्छ।
एक सम्बन्ध वा समुदायमा शान्ति र सद्भाव पुनर्स्थापित गर्न द्वन्द्व समाधान गर्ने कार्य।
प्रक्रियाहरूको लागि छाता शब्द जुन सक्रिय रूपमा स्वस्थ सम्बन्ध र समुदायको भावना निर्माण गर्दछ ताकि द्वन्द्व र गलत कार्य रोक्न र सम्बोधन गर्न। आरपीले एक प्याराडाइम सिफ्ट प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन सम्बन्धको बहालीमा नियम तोडिएको नियमको सट्टामा हुने क्षतिमा केन्द्रित हुन्छ। (स्रोत: पुन: स्थापना अभ्यासहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान)
पुन: प्रवेश कार्यक्रमहरू:
समर्थित प्रक्रियाहरू जसको माध्यमबाट जेलबाट छुटेको व्यक्ति समुदायमा बस्न फिर्ता समायोजन गर्दछ।
शिकार: वैधानिक परिभाषा:
एक व्यक्ति जसले शारीरिक, भावनात्मक वा आर्थिक चोट वा मृत्युलाई आयोगको प्रत्यक्ष परिणामको रूपमा व्यवहार गर्दछ वा अपराध वा दोषी कार्यको आयोगको प्रत्यक्ष परिणामको रूपमा र एक नाबालिग, अयोग्य, वा हत्याको शिकारको परिवारका सदस्यहरू पनि सामेल गर्दछ।
कुनै व्यक्ति, व्यवसाय, स्कूल, वा समुदाय साझेदार जो शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, वा आर्थिक अपराध, हानि, वा द्वन्द्वबाट प्रभावित छ। यो शब्द "शिकार" र / वा "बचेकाहरू" का साथ आदानप्रदानको लागि प्रयोग हुन सक्छ।
समर्थन र उत्तरदायित्व कार्यक्रमको सर्कलहरू समुदायमा पुन: प्रवेशमा बन्दीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने पुनर्स्थापनात्मक न्याय मोडेलमा आधारित। प्रशिक्षित COSA स्वयंसेवकहरू to देखि। जनाको टोलीमा काम गर्छन् र समुदायमा फर्कने र दिन-प्रतिदिनको जीवन प्रबन्ध गर्न उनीहरूलाई सहयोग गर्न कोर सदस्यसँग साप्ताहिक भेट गर्दछन्।
आपराधिक न्याय प्रणाली:
प्रणालीले अपराधको अभियोग लगाउनेहरु लाई पक्राउ गर्न र चलाउन प्रयोग गर्‍यो, र अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई सजाय दिने र थुनामा राख्ने काम गर्‍यो।
एक प्रक्रिया जसमा अपराधको लागि जिम्मेवार पक्षलाई अदालतबाट जवाफ नदिन अन्य तरिकाबाट समुदायबाट उनीहरूको कार्यको प्रभावको बारेमा छलफल गर्न, परामर्श वा पदार्थ दुर्व्यसन उपचार मा भाग लिने, र / वा सामुदायिक सेवा पूरा गरी जोगाउन अनुमति दिइन्छ। यदि जिम्मेवार पार्टीले सफलतापूर्वक एक डाइभर्सन प्रोग्राम पूरा गर्दछ भने, अपराध उनीहरूको रेकर्डबाट हटाउन सकिन्छ।
अभियोग / शुल्क:
एक फौजदारी कानूनी कागजात एक आपराधिक अपराधको साथ एक व्यक्ति चार्ज। कसैलाई अभियोग लगाएकोमा अपराधको आरोप लगाइएको छ।
अपराधी / जिम्मेवार पार्टी ज्ञात, पक्राऊ, वा आरोप लगाइएको छ वा छैन भन्ने कुराको वास्ता नगरी, अपराध, हानि र उल्लंघनबाट पीडित / पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने एक कार्यक्रम र प्रक्रिया। यो काम आपराधिक कानूनी प्रणालीसँग समानान्तर (तर स्वतन्त्र) हो। सहायताले भावनात्मक समर्थन, सुरक्षा योजना, जानकारी र अन्य संगठनहरूलाई सिफारिश, वा आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न वित्तीय सहायता पनि समावेश गर्न सक्छ।
एक व्यक्ति जसले अपराध र / वा हानि गर्छ। यो शब्द "अपराधी" वा "अपराधी" लाई बहाली न्याय शब्दावलीमा प्रतिस्थापन गर्न प्रयोग गरीन्छ। जिम्मेवार पार्टीलाई पुनःस्थापनात्मक न्याय प्रक्रिया भरमा "सहभागी" भनेर पनि चिनिन्छ।
प्रतिगामी / दंडात्मक प्रक्रिया:
न्याय र प्रक्रियाको अभ्यास जुन अपराधलाई राज्यको बिरूद्ध उल्लंघनको रूपमा हेर्छ, जसको लागि जिम्मेवार व्यक्तिले दण्ड तिर्नुपर्दछ वा दण्ड भोग्नुपर्दछ (प्राय: जरिवाना, सुधारिक पर्यवेक्षण, वा कारावास)। संयुक्त राज्य अमेरिका मा वर्तमान कानूनी प्रणाली यस मोडेल को एक उदाहरण हो।
अदालतहरू जसले अपराधीहरूको विशेष प्रकारहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, जस्तै पदार्थको समस्या वा मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूको आकलन गर्न, र तिनीहरूलाई उपचार र सजाय प्रक्रियाको एक एकीकृत अंगको रूपमा उपचार र अन्य सेवाहरूको सन्दर्भमा।
पीडित: आरजे परिभाषा:
कुनै व्यक्ति, व्यवसाय, स्कूल, वा समुदाय साझेदार जो शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, वा आर्थिक अपराध, हानि, वा द्वन्द्वबाट प्रभावित छ। यो शब्द "प्रभावित पार्टी" को साथ आदानप्रदानको लागि प्रयोग हुन सक्छ।
एक व्यक्ति विरुद्ध आपराधिक आरोपको औपचारिक पठन, अक्सर आरोपीको अगाडि। एक मुद्दामा आरोपित व्यक्तिलाई निर्दोष, दोषी, वा कानुनले अनुमति दिएको रूपमा पेश गरीएको मुद्दाको अवसर दिइन्छ। जमानत प्राय: यस कार्यवाहीमा सेट हुन्छ, किनकि अदालत डाइभर्सनको सन्दर्भ हो।
आपराधिक न्याय प्रभाग:
एक आपराधिक केसमा, एक व्यक्ति भर्मोंट राज्य द्वारा राज्य कानून उल्ल vio्घन वा तोड्ने आरोप लगाइएको छ। भर्मन्ट ज्युडिशियरीको आपराधिक प्रभागले फेलोनिस सम्बन्धी मुद्दा सम्हाल्छ जुन सबैभन्दा गम्भीर अपराध हो, र कुकर्मी जो कम गम्भीर हुन्छन्। आपराधिक प्रभागले अन्य डिभिजनहरूबाट सबैभन्दा गम्भीर मामिलाहरू लिन सक्दछ, जस्तै माछा र खेल र ट्राफिक उल्लंघन। आपराधिक प्रभागलाई आपराधिक अदालत पनि भनिन्छ। अदालतले निर्दोष व्यक्तिको अपराध वा निर्दोषता निर्धारण गर्दछ जुरी ट्रायल, अदालत ट्रायल, र दोषी याचिका मार्फत।
सिविल ड्राइभिंग इजाजतपत्र निलम्बन कार्यक्रमको साथ डिजाइन गरिएको छ उनीहरूलाई ड्राइभरको इजाजतपत्र पुनः प्राप्त गर्न जब उनीहरूले जरिमाना र शुल्कहरू तिर्छन् भने।
सूचीबद्ध अपराध / सूचीबद्ध अपराध:
एउटा अपराध, एउटा कुकर्म भन्दा अपराध। सूचीबद्ध अपराधमा पीछा, घरेलु हमला, यौन हमला, हत्या, बढ्दो हमला, अपहरण, गैरकानुनी संयम, लापरवाह जोखिम, एक कब्जा वासस्थानमा चोरी र अन्य समावेश छ। सूचीबद्ध अपराधको एक पूर्ण सूची भर्मान्ट विधान को शीर्षक १ 13 मा विस्तृत छ ।
पूर्व परीक्षण सेवाहरू / PTS:
यो अदालतले आदेश दिएको र स्व-रेफर गरिएको कार्यक्रम पदार्थ प्रयोग वा मानसिक स्वास्थ्य उपचार आवश्यकता भएका वयस्कहरूको लागि हो जुन अदालत प्रक्रियामा जाँदैछन् र अन्तिम केस रिजोलुसनको लागि पर्खिरहेका छन्। यसले सहभागीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य, पदार्थको प्रयोग, र गैर-उपस्थितिको जोखिम / पुन: अपराधको जोखिमका साथै क्षेत्र सेवाहरूमा द्रुत जडानमा केन्द्रित प्राथमिक स्क्रीनिंग प्रदान गर्दछ।
पुनर्स्थापना: पीडित / अपराधबाट पीडितलाई जिम्मेवार पक्षले भुक्तान गर्न सहमत गरे। यस सम्पत्ति हानि, चिकित्सा खर्च, परामर्श को लागत, आदि को लागी पैसा समावेश गर्न सक्छ। पुनर्स्थापना जिम्मेवार पार्टी हो कि तिनीहरु लाई भएको हानी को लागि आर्थिक उत्तरदायी। (कृपया कम्युनिटी जस्टिस जस्टिस सेन्टरको पुनःस्थापना नीतिलाई निर्दिष्टका लागि सन्दर्भ गर्नुहोस्।
पुन: स्थापना न्याय:
एक प्रक्रिया र न्यायको अभ्यास जसले क्षतिलाई मर्मत गर्ने कुरामा जोड दिन्छ, जसमा अपराध र द्वन्द्व सम्बन्धको उल्लंघनको रूपमा देखिन्छ। पुनर्स्थापनात्मक न्यायका तीन मुख्य उद्देश्यहरू छन्: व्यक्ति र समुदायलाई अपराधको कारण हुने क्षतिलाई बुझ्ने; जिम्मेवार पार्टीले प्रभाव पारिएको जो कोहीलाई संशोधन गर्न सक्ने तरिकाहरू अन्वेषण गर्न; र जिम्मेवार पार्टी अगाडि बढ्नको लागि र आफ्नै लागि सकारात्मक लक्ष्यतिर काम गर्ने। पुन: स्थापना न्यायका आधारभूत प्रश्नहरू: कसलाई चोट लागेको छ? यी हानिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ वा मर्मत गर्न सकिन्छ? कसले सम्बोधन गर्नुपर्छ वा हानीको मर्मत गर्नुपर्छ?
वयस्कहरूको लागि अपराधको आरोप लगाइएको डायभर्सन प्रोग्राम जससँग पदार्थ प्रयोग वा मानसिक स्वास्थ्य उपचार आवश्यक पर्दछ। यस कार्यक्रममा भाग लिनेहरू चाँडै सेवा प्रदायकहरूलाई पठाइन्छ र उपयुक्त भएमा, कार्यहरूको लागि उत्तरदायित्व लिने भागको रूपमा पुनःस्थापनात्मक प्रक्रियाहरूमा सन्दर्भ गरिन्छ।
युवा पदार्थ जागरूकता सुरक्षा कार्यक्रम (वाईएसएएसपी) नाबालिग मद्यपान र मारिजुआना (एक औंस वा कम) को कब्जाको बिरूद्ध कानून तोड्नका लागि उत्तरदायी युवाहरुलाई उत्तरदायी राख्ने तरिकाको रूपमा डिजाइन गरिएको छ, र तिनीहरूलाई पदार्थको परिणाम र जोखिमको बारेमा सिकाउन र पहिचान गर्न। युवा सम्भावित पदार्थ दुरुपयोग समस्याहरूको साथ तिनीहरू उपचार प्राप्त गर्न सक्छन्। सहभागीहरूले शुल्क तिर्छन्, एक स्क्रिनि or वा मूल्या assessment्कनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त भएको वा प्रमाणित पदार्थ दुरुपयोग सल्लाहकारसँग भेट्छन् (र सल्लाहकारको सिफारिशहरू अनुसरण गर्नै पर्दछ), र शैक्षिक कार्यक्रममा भाग लिन र सामुदायिक सेवा गर्न सक्छ। सहभागिता स्वैच्छिक हो।